के हो भाकल ? के भाकल गरेपछि बुझाउनै पर्छ, नबुझाउँदा के हुन्छ ? - dautarimedia.com
पहिले भाकल भनेको के हो भन्ने उत्तर तर्फ भाकल भनेको हामीले कुनै पनि देवीदेवता सँग गरिने भाका हो । एक किसिमले भनौभने भाकल भनेको भाका नै हो ।
Previous: उपत्यकामा लागू निषेधाज्ञा आज सकिँदै, अब निषेधाज्ञा थप हुन्छ कि हुँदैन?
Next: श्रीमानले सासुको खातामा पैसा पठाए, श्रीमतीले ४ छोरी सहित पोखरीमा हाम फालिन्